I-PsyOp enzulu ye-deepfake 'ghyOp yokuthatha yonke inkululeko yakho kunye nokuqaliswa' kwamapolisa acingayo '(icandelo le-2): UMartin Vrijland
Kuyancomeka indlela umatshini wePsyyOp awasebenzise ngayo onke amandla okubeka ndawonye le 'spost' yeyona ntsapho i-Ruinerwold 'yesepha yobomi eyinyani. Isikripthi esihle sefilimu, apho ibhlog kunye neevidiyo zidityaniswe khona. Ewe kunjalo "licebo lobuqhetseba" Ngokwenene ufumana iibhiliyoni zakhe ngendlela enesidima kwaye akayidingi indawo yendawo.
De iifilimu ezintle 'ka-ghost utata' kaGerrit Jan van Dorsten (aka John Eagle) wo 'ghost usapho' baye baqwalaselwa, kuba ngapha koko ucinga ukuba inokuba yinto enzulu. Umzekelo, unokufunda iskripthi esonwabisayo kwi Eli nqaku leVolkskrant okanye apha Akukho simboli. UDe Telegraaf, njengomkhuthazi omkhulu wale PsyOp, utyhala abafundi ukuba babe lilungu le-premium. Unokusebenza ujikeleze oku ngokuvula inqaku kwiModi ye-Incognito (Google Chrome). Emva koko ungaxelela incwadi yamakhwenkwe amahle (njengaye) usafundwa simahla.
Kwenziwe ibali elihle kakhulu eliya kukudonsa ngohlobo lokufuna kukaDan Brown. Thina maDatshi sikufumana oku kumnandi. Siyayonwabela le nto. Ukuba ayiyonyani, iseyimbali emnandi. Kodwa kutheni le nto ingenakuba yinyani? Ke kutheni amajelo eendaba esiya kuyo yonke loo ngxaki? Ewe kukho ezinye iibott eziphindwe kabini kule PsyOp. I-PsyOp (isifinyezo: sokusebenza kwengqondo) isetyenziswa njengombuso ngokubambisana ne media yakho ukukholisa abantu ngomthetho omtsha ongasoze wamkele. Kule nto kufuneka udlale kuqala ngengqondo. Ke wena uyila ingxaki kwaye ungena kwiingxaki ezinkulu zeendaba. Ukhupha ingqumbo ebantwini phakathi kwamajelo eendaba ezifanayo. Kwimithombo yeendaba zentlalo, umkhosi wakho wetroll ulungele ukugxotha nabani na ogxekayo. Emva koko ke masuntswana lilungele isisombululo enifuna ukusazisa ngalo lonke ixesha. "Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululoubizwa ngokuba ngumdlalo wengqondo.
Isisombululo eshalofini kule opera yesepha ngokwenene sasicacile ukususela kusuku lokuqala: Urhulumente ufuna ukukwazi ukujonga emva kweminyango yangaphambili. Apho usadinga iphepha-mvume lokukhangela kumtshutshisi woluntu, loo nto inyanzelekileyo ukuba isuswe. Ngenxa yoko kuya kufuneka udale ingxaki kwimidiya eyenza wonke umntu acinge "Ewe, hayi, ayisekho. Into eneneni kufuneka yenziwe ngayo!Utata (owayenegama elihle lesepha le-opera uJohn Eagle) naye wayenenkolo yakhe kwaye wabakhusela abantwana bakhe kwinkqubo yemfundo eqhelekileyo. Unokuvele uyibone: ngokukhawuleza ujongana nabantu abafuna ukwenza imfundo yasekhaya. "Isizathu sokuba le mfundo yasekhaya ibe yayikukuba 'isikolo sasekhaya' apho uGerrit Jan eze nabantwana bakhe, ngequbuliso alandela imithetho yoburhulumente."Imithombo yeendaba iyasixela kolu chungechunge lwesepha. Ngamafutshane: ukuba awuvumelani nemithetho-siseko yemfundo yaseburhulumenteni kwixesha elizayo, unxulunyaniswa nale eccentric, ibizwa ngegama likaJohn Eagle, kwaye uthathwa njengomntu owahlula abantwana bakho kwihlabathi langaphandle.
Ke kwisikolo samabanga aphakamileyo umntwana wakho uxelelwa ukuba ayisiyo inkwenkwe okanye intombazana, kodwa ukuba usenokuthi akhethe isini sakhe kwaye angaguqulwa, kwaye ukuba awuyithandi kakhulu kwaye uthatha abantwana bakho esikolweni, ke wena ukusukela ngoku 'ungumzali oseziporini'.
Zininzi i-bottoms eziphindwe kabini kule PsyOp. Umhle! Ngaba ucoca amanzi akho kunye negadi yakho yemifuno? Ke ungumntu ongaqhelekanga njengoJohn Eagle. Ngaba uyazithanda iinkuni kwaye uyazenzela izinto zakho? Ke ungumntu ongaqhelekanga njengoJohn Eagle. Ngaba unayo i-bloglog kwaye ubhala malunga nemiba yokomoya? Ke ungumntu ongaqhelekanga njengoJohn Eagle. Le blog ka-John Eagle ngokuqinisekileyo iyinyani njengeevidiyo zakhe. Isenzo esihle; ababhali ababalaseleyo beskripthi! Ngaba ukhe wayibukela imovie kwaye uphulukene nayo ngokwakho kwi-movie kwaye waziva ukuba yenzekile? Oko kuyenzeka ngoku. Izitudiyo zefilimu zikaJohn de Mol zineendlela zokwenza ifilimu. Ngubani okuxelela ukuba le nyaniso kunye neentsomi azidityaniswa xa uJohn de Mol enazo zonke iindlela zobugcisa zokuhlanganisa le sepha kunye? "Ewe kunjalo, kodwa bonke banamangqina awayeyazi indoda okanye usaphoMsgstr ". Ewe, kunjalo nje kwiimovie. Kuya kufuneka ukuba uye kumgaqo we-deepfakes. Unokwenza abantu babonakale njengobomi kwaye 'bokwenyani' kwiimuvi, udliwanondlebe, kwimbali, kuyo yonke imbali yeendaba zentlalo, umfanekiso, isandi, abancinci, abadala, njalo njalo.
Ndihlala ndixoxa ngeendlela zobugcisa ezinokuthi zenziwe ngabalinganiswa abaphambili. Ndingathanda ukuphindaphinda le nto apha kubafundi abatsha. Kuba ukuba ulandela iindaba mihla le, kubaluleke kakhulu ukuba uqhelane nale nto, kuba uya kubona ukuba zeziphi iindlela ezikhoyo zokudlala abantu. Kulula kakhulu.
I-Deepfakes zenziwe ngeGAN (i-Generative Adversarial Networks)) zobugcisa. Le yesoftware ehlakaniphile eyenza ukuba, ngokusekelwe kwiinkqubo ezininzi ze-AI kwinethiwekhi, idala abalinganiswa ngaphandle kwento. I-A yiNgesi yesiNgesi soBuchule; yintoni emele ingqiqo yolwazi. Enye inethiwekhi ye-AI ivavanya imifanekiso eyenziwe yintanethi yokuqala kwaye iyayivuma okanye iyayivuma. Ngokwenza oku kumjikelezo, abalinganiswa banokubheka ngokunyanisekileyo kwisinyathelo ngasinye, ukuze ekugqibeleni unikeze abantu abaqhelanisiweyo ababukeka njengabantu abaqhelekileyo bemihla ngemihla (onokuhlangana nabo kwisitalato). Ukuba ufuna ukwazi kakuhle indlela oku kusebenza ngayo, qaleni ukhangele ividiyo elandelayo ngeNVIDIA (umenzi wekhadi elibonisa imifanekiso yePCs).
Akukona nje kuphela luncedo ukwazi ukuba le nkqubo ikhona, kodwa kwakhona indlela umlinganiselo onzulu ongasetyenziswa ngayo, umzekelo, iividiyo okanye ukuvelisa iiprojethi zeendaba zoluntu (kubandakanywa nembali yonke; kuquka iifoto kunye namavidiyo kunye nokuthanda kwabanye ukunyusa iingxelo zeendaba zoluntu). Ngokomzekelo, iingxoxo zeendaba zoluntu zinokugcinwa lula kwi-intanethi "ngabasebenzi basekhaya" okanye abasebenzi be-arhente ye-telemarketing, umzekelo, apho abalinganiswa onokuxoxa ngabo banokufihla emva kweso sithuba esicacileyo (kunye nabaxhasi babo abaxhamli nabo bazaliswa ngeprofayili enzulu). Bayakwazi ukuhlasela abantu kwixesha labo kwiingxoxo ukwenzela ukuba bathuthele phakathi kwabantu ngendlela ethile.
Makhe sijonge kuzo zonke iindlela zokufaka izicelo, kodwa ngaphambi kokuba siqale, kunceda ukwazi ukuba umdlalo wezemidlalo kunye nefilimu, kodwa nabavelisi beTV, baye bafumana iindlela ezinjalo ixesha elide. Nangona kunjalo, umsebenzi ulungelelanise kangangokuba ungakwenza ngokwakho kwi-PC-garden-nasekhitini yekhaya.
Xa uPaul Walker efa phakathi kwe-7 yokurekhoda okukhawulezayo kunye nefuthe, inkampani yeWeta Digital ibizelwe ekugqityeni inguqulo yefilimu kaPaul Walker. Ngokusekelwe kwiinkqubo ezinjengeemifanekiso ezindala, izicwangciso zomzimba zabazalwana bakaPawulos kunye nokukhangela intloko kaPawulos, iWeta Digital yazisa uPaul Walker ebomini. Ividiyo engezansi inikeza isishwankathelo sendlela oku kusebenza ngayo.
I-3D inkqubo yokuthunyiswa kwesimo sokunyuswa kwenkqubela iye yahlala iminyaka kangangokuba abadlali bembatha izikhwama ukurekhoda ukunyakaza kwabo baze banqamle iimpawu ezidalwe ngamanani ngeCGI. Oku kufaniswa nokusetyenziswa okwenziwa nguPaul Walker, kuphela ngabadlali abaphilayo bembethe i-suit capture capture. Olu hlobo lusetyenziswa kubantu abano-bhajethi ephantsi (jonga ividiyo engezantsi), kodwa umzekelo omhle wefilimu apho le ndlela sele isetyenzisiwe yi-Avatar Avatar esuka kwi-2009 (jonga apha).
I-NVIDIA sele sele ibambelele ekusebenziseni kwezi zixhobo kunye ne-teknoloji yeCGI, kuba isebenzisa amanethiwekhi e-neural ukuqeqesha isofthiwe. Enyanisweni, le yindlela efanayo emva kobuso obunzulu. I-NVIDIA ngoku ayikwazi nje ukuvelisa ubuso obungabikho, kodwa inokuyidlulisela idolophu ngekhamera kwaye uyibuyisele kwindawo yebusika (ngexesha langempela). Amasu anjalo angasetyenziselwa ukuqeqesha isofthiwe ye-AI yemoto yokuzilawula ekuguqukeleni izimo zemozulu, kodwa zingasetyenziselwa ukwenza i-suit capture capture ifanelekile. Ikhamera ye-GoPro elula okanye ikhamera yewebhu iyanele. Khangela i-1: 03 min. Kwividiyo engezantsi ukubona ukuba kusebenza njani.
Ngoku ungacinga ukuba ithuba lokwenza oku ngexesha langempela alikho. Cinga kwakhona. Sivele sibonile ngasentla ukuba kunokwenzeka ukudala abantu abangabikhoyo ngeNgcaciso yokuThuthuka kweeNethiwekhi. Ngoku siyazi ukuba zombini ummandla wasezidolophini kunye nomlinganisi unokuveliswa ngeenethiwekhi zomnxeba. Umbuzo kukuba ingaba kwenzekayo ngexesha langempela. Yilapho i-teknoloji ye-realtime time-reenactment ifika. Oku kuye kwajikeleza i-PC elula ekhaya ngonyaka we-2015 (jonga ividiyo engezansi).
Konke kukho, ngoko sinako ukuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba iminyaka ivelise amavidiyo angcolileyo. Nangona kunjalo, iteknoloji ngoku sele ilula kakhulu kunye nokuvela kweeNethiwekhi zokuThuthukiswa kweziNtshukumo, iiNethwekhi zokunxibelelana kunye nexesha eliqhelekileyo lokubonakalisa ubuso, ukuba unokwenza imbali yonke yomntu ongekhoyo kumcimbi wemizuzu, udliwano-ndlebe lwaloo mntu engekhoyo unokwenza nayiphi na imeko evela kuyo nayiphina imbonakalo yekhamera kunye nayiphi na imeko yemozulu.
Ziziphi iziphumo zolu? Ukuqala, ungatsho ukuba awukwazi ukuthemba i-100% iminyaka. Jonga apha Ubungakanani ubuchule beCGI obuye busetyenziswa kwishishini lefilimu. Nangona kunjalo, okwangoku kulula kakhulu ukuba nabani na uhlahlo lwabiwo-mali bamawaka angamawaka angakwazi ukwenza oku. Ukuba sicinga ukuba amajelo alungileyo, ngoko sinokucinga ukuba abazange basebenzise iindlela ezinjalo kwiminyaka. Nangona kunjalo, ukuba sicinga ukuba oorhulumente basebenzelana nokusebenza kwengqondo ukuba bazise abantu ngendlela yokumkeleka kwemithetho emitsha neyomeleleyo, ngoko simele siqaphele ukuba iminyaka kwiminyaka engekho nto ihleli ngendlela yokuvelisa iindaba eziyinyani. Ngaloo mxholo kunomdla kakhulu ukwazi ukuba i-arhente yeendaba ephakamileyo yelizwe (i-Algemeen Nederlands Persbureau; i-ANP enezantsi) isezandleni zomvelisi weTV (ngubani naye unesigidigidi). Kufuneka sibe mkhulu kangakanani ukuba siqiniseke ukuba ezi zinto zingasetyenziswanga iminyaka?
Kubonakala ngathi amajelo akhangele ukuvala ukuvuza okuthi uMartin Vrijland utshitshise phantsi kwinqanawa enkulu yeendaba. Kwiminyaka emininzi ngoku, ndichazile indlela abeendaba abangasebenzisa ngayo imifanekiso. Ngoko ke uJort Kelder no-Alexander Klöpping bavunyelwe kwinkqubo yeKelder & Klöpping TV bonise ziphi izinto ezinzulu. Kwakhona inomathotholo Umnqophiso wezithombe I-BNR Nieuwsradio (abaphathi beengcinga) bathetha ngoku kutshanje oko ndibhalile malunga nokude. Kucacile ukuba uloyiko luhlala lubonakala kwaye ukuba abenzi benkqubo mabazame ukugcina umbukeli kunye nomphulaphuli. Kufuneka uqhubeke uthembela kumajelo aseburhulumenteni nakwintando yesininzi, kuba akukho nto ibhetele kunokuba isixuku sivukele (ukuthetha ngamazwi aseJort phantsi).
Ngokuqinisekileyo "isisombululo" kukho konke okokuba oorhulumente kunye nenkampani yezobuchwepheshe baya kuzama ukongeza uhlobo lweetermarket kumafilimu, ukwenzela ukuba bahlolwe ukuba baqiniseke. Umbuzo wodwa kukuba ukuba oorhulumente ngokwabo basebenzisa iindaba eziyinyani ngeminyaka ukuba baphucule umthetho kwaye badlale abantu nokuba ingaba i-watermark inokuthenjwa. Ngaba i-butcher iya kukwala inyama yakhe? Hayi, akunjalo. Zonke iindaba ezivela kuJohn de Mol, NOS, De Telegraaf njalonjalo ziye zithembeke ngokupheleleyo kwaye zinyaniseka! Isiqhamo. Ngaba ucinga ukuba uYohn de Mol uza kubonakala kwiTV namhlanje okanye ngomso athi: "Siyaxolisa, bafazi kunye nenceba, ndenze iindaba zobuxoki kunye nazo zonke ii-studio ze-TV kunye nesofthiwe enginayo. Ndikunikezele ngeendaba ezikhohlisayo kwaye ndadlala kunye nokusebenza kwengqondo kwindleko yerhafu yerhafu kwaye ndagcwalisa iingxowa zam"? Hayi, akunjalo. Kwaye kufuneka ube nokholo kumajelo aseburhulumenteni nakulo rhulumente, kuba ngubani omnye onokumthemba? Funda apha...
Unakho ukufaka izicelo ezinzulu:
ukunyusa iingxelo zeendaba zoluntu
iifoto kunye namavidiyo avela kwixesha elidlulileyo kuquka nabentsapho kunye nabahlobo
buxubusha udliwano-ndlebe nomntu ongekho
imifanekiso kwiinkhamera zokhuseleko
ividiyo njengobungqina kwiindaba (iimveliso zeendaba ezikhohlisayo)
Singatsho ke ngokuqinisekileyo ukuba ukusuka kwindawo yezobuchwepheshe akukho nto inokuthintela 'usapho lwesiporho' kwi-PsyOp. Ngumbandela nje weenyanga ezimbalwa zokulungiselela. Ngokuqinisekileyo usaya kukwazi ukucinga:Ewe, kodwa eso sakhiwo eZwartsluis sasiyivenkile yokudlala?"Ukhe waya eZwartsluis? Ngaba ucinga ukuba kukho iqhude elinqwenela oko?
Umbuso uya kuthi kwakhona usebenzise le PsyOp ukuzoba uhlobo lwesikhokelo 'sokuphambuka izimvo'. Oku kwenza ukuba uGeorge Orwell 1984 acinge ukuba amapolisa ayinyani njengenyaniso. Abantu banamathele nje njengemilenze kaPeter R. de Vries kwindiza zeTransavia. Yifunde apha iyaqhubeka kwinxalenye ye-3.
Uludwe lwekhonkco lovimba: bnr.nl, wikipedia.org, volkskrant.nl, geenstijl.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl
tags: blog, blogspot, ukhozi, eziziimbalasane, UGerrit Jan van Dorsten, John, psyop, ezenkolo, iliwa, Isiporho losapho, ghost utata
21 Oktobha 2019 kwi-11: 15
Ukuba into ethile ngokucacileyo ayisiNkohliso ... uhlala unemiqulu esokolayo iimpendulo:
21 Oktobha 2019 kwi-14: 40
Oko bendilumkisa amashumi eminyaka kwindawo endikuyo ngoku kuyasongela ukuba izakwenzeka. Bonke ababulele "Ewe, ayizukuhamba ngokukhawuleza.", "Urhulumente ulapha ukusikhusela.", "Sisininzi kwaye abekho."
Ukulandela emva kokugqibela, ndicwangcise kwangaphambili kwaye ndafudukela kuba bendifikile kwisigqibo sokuba i-Neanderlander ephakathi ayivuki ngqo kwaye ke kwakungekho 'sininzi' eMadurodam.
Kuya kuthi ngokufikelele kwinqanaba lokuba amapolisa akhabe kwiminyango ejonge kumqeshwa weNSB yengingqi. Inoffizieller Mitarbeiter kwaye abantwana bakho banokuthatha ngaphandle kokuzithethelela. Kwaye ngayo yonke itekhnoloji ekhoyo, ingumoya opholileyo ukuskena indlu yakho ukude kwaye ususe yonke imiqobo.
Kwaye ke kunokuba kunjalo ukuba imbinana liqhubeke nokujonga ngaphezulu kweegusha ... Bukele kwaye baNceku. Madurodam, yonke ikhangeleka izolile kwaye inobuhlobo kodwa kukho ubuqhophololo bobuqhetseba ...
21 Oktobha 2019 kwi-15: 34
"Uhlobo lwe-cocktail yeengcinga zetyala kunye neembono zenkolo" .. UDe Telegraaf uxinzelela i-psyop emapoliseni. Igama uMartin Vrijland alikakhankanywa, kodwa ikhonkco elingaphantsi lisekwe ngokucacileyo. Yonke into egxekwa ngurhulumente ngoku inxulunyaniswa 'noyise ghost' kunye 'nosapho ghost'.
(vula imo yokungena kwinkqubo yeGoogle Chrome)
21 Oktobha 2019 kwi-15: 40
Kwaye ukuba i-PsyOp isongela ngokusongela ukuba iwele ngendoda, isidumbu somfazi oswelekileyo ngokungaziwayo sinokuhlala sifumaneka egadini (okanye kwenye indawo). Emva koko ibali lifumana ukunyaniseka okukhulu.
21 Oktobha 2019 kwi-15: 44
ungayithatha kancinci ukuba uninzi lwabaphikisi sele benikwe imephu kwaye ngokukhawuleza xa ixesha lilungile 'lomntu odidekileyo' onesiphazamiso sokuziphatha okuphikisayo phantsi kwesitshixo kunye nesitshixo ... Igama elithi junta liza kuphela ngokukhawuleza ngamathuba ezi psychopaths zinazo.
21 Oktobha 2019 kwi-15: 45
Ngethamsanqa, abongikazi abanokuthi babanakekele aba bantu sele yenziwe ngemfundo yabo.
UNahomi Hoogeweij sele ekhangele phambili kuyo:
21 Oktobha 2019 kwi-15: 59
akukho kusilela kwee sadists kwi-madurodam ...
7 Meyi 2019 kwi-12: 49
Usista uNahomi uza kukuphatha ngothando 🙂
Kuya kufuneka ndikunike, ungaguquguquki kumbono wakho Salmon 😉
21 Oktobha 2019 kwi-16: 05
Omnye umntu odidekileyo onokuthi agxothiwe kwi-psychance ukuba usapho okanye abamelwane babenokulumkisa amapolisa kunye nomthetho we-Edith Schippers, ukuba ulawulwe, ukuze nabani na owahlukileyo kancinci abenokuzivalelwa elugcinweni.
Sithi ngaba ngumntu oxhasa iyelenqe?
21 Oktobha 2019 kwi-16: 27
ayiyonjongo ukuba wena njengentsapho nihlale phantsi kweradam. Njengoko kufanelekile ukuba likhoboka laseburhulumenteni elifanelekileyo kufuneka uhlale kwi-radar kwaye uhlawule iirhafu ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwaye usoloko unakho kwaye ulenzela elo khoboka.
Inokwenzeka njani into yokuba usapho oluvela eRuinerwold luhlale phantsi kwerada ixesha elide?
22 Oktobha 2019 kwi-03: 20
Inqaku elinamandla kwakhona uMartin! Kubhalwe phezulu.
« I-PsyOp ye-ghost 'yokusebenza kwengqondo': ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa engqondo'
I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-3) »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.497.511